Nomad Sport Lunar Grey, yekupedzisira Nomad tambo | Ndinobva mac
Kwenguva yakati ikozvino tanga tichiedza uye tichikurudzira Nomad zvishongedzo zvekuti ini ndiri vashandisi veMac uye zvakare kune vatinozivana navo uye shamwari dziri kunze kwenetiweki. Mune ino kesi, iyo North America kambani yakaparura ruvara nyowani rweiyo Apple Tarisa yavo Sport mutambo, iyo Lunar Grey.
Isu takafarira iyi tambo nyowani kana kuti pane nyowani ruvara nekukurumidza patakangoiona uye tikati nekuita, isu tatova nacho pedu. Ichokwadi ndechekuti inonzwa bhandi rekutanga kunyangwe rakagadzirwa nesilicone iyi iyo yakakosha silicone iyo Apple inodaidza fluorastomer.
1 Dhizaini, mhando uye mutengo unonzwisisika
Dhizaini, mhando uye mutengo unonzwisisika
Hatigone kuti Nomad inogadzira uye inogadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakapesana. Ehezve, zvese zvishongedzo zvatakakwanisa kuyedza kubva kuna Nomad uye izvo zvinoramba zvichibuda kubva kune iyi kambani yeCalifornia zviri kukurirwa mune yega yega vhezheni. Ichokwadi kuti iyo Nomad Sport yaive yatovepo, asi neruvara mutema nemazuva akazotevera yakatangwa iyo Lunar Grey iyo yakanaka chaizvo.
Hunhu hwezvinhu zvinoshandiswa kugadzira uyu Sport Lunar wakanaka kwazvo. Iwe hauzove nechero dambudziko netambo maererano nekugadzirisa kana kusakara nekubvarura. Zvinotaridza kuti tambo dzese pamusika dzakagadzirwa nesilicone dzakafanana asi kwete, handizvo. Iyi Nomad Sport Lunar Grey modhi ine rakasiyana bata kune akajairwa silicone mabhanhire, inogona nyore kutakura Apple logo uye kutengeswa seyayo yega tambo.
Mumwe wemibvunzo yakatitambudza yaive yekuti zvinhu zvakashandiswa pamabhande matsva eNomad aya zvaizofanana neApple uye hongu, tinofanirwa kutaura izvozvo Icho chinhu chinoyevedza chisina kufanana nepurasitiki kana silicone yemabhande akajairwa.
Kuvharwa kwaro kwakachengeteka uye ichi chiratidzo cherunyararo kune vedu vedu vanofamba zvakanyanya kana kuita zvinowanzoitika zvemuviri. Iyi yakakosha yakakosha pfungwa kune vazhinji vedu ndeyekuti kusarongeka zvisina kugadzikana kana kushaya simba kuvhara kunogona kufanana nenjodzi. Mupfungwa iyi ini handidi kuisa panjodzi uye nekuvharwa uku hatizove nematambudziko chero erudzi.
Unogona zvakare kuitenga kana iwe uchida muchitoro Zvinoshamisa unova mutengesi zviri pamutemo wezvigadzirwa zveNomad munyika medu.
Yakatumirwa pa: 29 March we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 29 March we2021
Yakanaka mukugadzirwa uye zvigadzirwa
Kuvhara kwakasimba uye kwakachengeteka
Nyaradzo yekushandisa uye nyore kuvhara
Mutengo hauna kudhura asi ndewemhando yepamusoro tambo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nomad Sport Lunar Grey, Nomad yakasarudzika tambo
Vatsoropodzi vanoda mwaka wechipiri waDickison uye Kune Vese Vanhu